आजको राशिफल पढ्नुहोस् ! मंगलबार -
आजको राशिफल पढ्नुहोस् ! मंगलबार
मानसिक तनाव र उल्झनलाई झेल्नुपर्ने छ । महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ भने गोप्य राखेमा मात्र सफलता पाउनुहुनेछ । कुनै महत्त्वपूर्ण काम बन्ने सम्भावना पनि छ, तर आज दिनभरि चौथो घरमा चन्द्रमा रहने भएकाले कुनै नयाँ काममा हात हाल्नु श्रेयस्कर हुँदैन ।
Tue-Apr-2019, 01:33 am मा प्रकाशित, 301 जनाले हेर्नुभयो
आज – १९ चैत्र २०७५ मंगलवार को राशिफल